2008-2015 Toyota Sequoia Jiro Jiro OEM Toyota Sequoia nitondra jiro jiro
Home > Fiara hafa > Toyota
Front Bumper dia nitondra jiro zavona ho an'ny Toyota Tacoma 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2016 2017 2018 2019 Toyota Tacoma Nanaparitaka Kitapo Jiro
Item No .: MS-TM0511-Sequoia
Ampidiro ary milalao jiro zavona ho an'ny Toyota Sequoia 2008-2015, 27 watt, loko mainty / crome misy, mampitombo ny filaminan'ny fiara amin'ny arabe.
ny Toyota Sequoia nitondra jiro zavona dia mety hitondra fiara amin'ny toetrandro isan-karazany toy ny toetr'andro, oram-batravatra, zavona ary alina tsy misy volana. Ny jiro zavona mpanampy miteraka taratra mamirapiratra sy avo lenta ary manome endrika vaovao ilay fiara ihany koa. Ireto tariby fanamboarana jiro taratra hazavana ireto dia mifanaraka amin'ny Toyota Sequoia 2008-2015.
Tombon'ny Toyota Sequoia Jiro Jiro
Nankatoavina ny DOT & SAE, ara-dalàna amin'ny fitondrana lalana;
Famolavolana patanty hisorohana ny fifaninanana;
Fanomezana mivantana ny famokarana ho an'ny fandefasana haingana;
Fampitana hazavana tsara ho an'ny traikefa mitondra fiara tsara kokoa amin'ny toetr'andro manjavozavo
Famaritana ny Toyota Sequoia Led Light Hog
modely Sequoia, Tacoma